Anigu waxaan ka imid dalka Suuriya waxaana ku noolaa meel deganaansho ah sannad iyo bar (waxaan ahay gabar, 15 sanno jir ah). Waxaan aad ugu xiisay dalkaygii mararka qaarna waxaan dareemaa murug. Qofkee i caawin kara? Anigu ma doonayo in aan cidna culeys saaro.
Du bist hier: Startseite / Anigu waxaan ka imid dalka Suuriya waxaana ku noolaa meel deganaansho ah...
Kali ayaad ku dareemaysaa dalka Jarmalka.
Waxaad soo martay waddo aad u dheer.
Hubbaal inbaddan oo kamid ahi ma uusan ahayn kuwo farxad leh waxayna ahaayeen kuwo murugo baddan.
Waxaad lasoo kulantay culeys aad u weyn.
Adigu weli ma tihid qof weyn.
Waxaad xaq u leedahay in aad heshid caawimaad iyo taakulayn.
Iyo: waxaad xaq u leedahay in lagu dhagaysto.
Midaana macnaheedu wuxuu yahay: aad ayay muhiim u tahay in ay dadku ku dhagaystaan.
Waa muhiim in codkaaga la maqlo.
Midaan waa mid kamid ah Xuquuqaha Carruurta UN-ka.
Macnaheedu waxay tahay: dadka adiga ku daryeela hadda way ku dhagaystaan.
Waxay daneeyaan waxa aad jeceshahay.
Waxay kugu caawinayaan in aad dareentid farxad iyo ammaan.
Haddii aysan sidaan samaynin haddaba waxbaa khaldan.
Kadibna waxaad u baahantahay in aad caawimaad raadisid.
Fadlan la hadal qof weyn oo aad ku kalsoontahay.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-09-29 13:13:262017-09-29 13:13:26Anigu waxaan ka imid dalka Suuriya waxaana ku noolaa meel deganaansho ah sannad iyo bar (waxaan ahay gabar, 15 sanno jir ah). Waxaan aad ugu xiisay dalkaygii mararka qaarna waxaan dareemaa murug. Qofkee i caawin kara? Anigu ma doonayo in aan cidna culeys saaro.